စိတ်မပျော်ရွှင် ရတဲ့အခြေအနေ မလွန်ဆန်နိုင် တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော မြန်မာအသင်း ကို အပြစ်မမြင်ကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ ရန်ရန်ချန်း – Shwe Naung
စိတ်မပျော်ရွှင် ရတဲ့အခြေအနေ မလွန်ဆန်နိုင် တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော မြန်မာအသင်း ကို အပြစ်မမြင်ကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ ရန်ရန်ချန်း
မနေ့ညက ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွင် မြန်မာ အသင်းမှ ဂျပန်အသင်းကို ဆယ်ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအခြေအနေ တွေမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော
မြန်မာ ဘောလုံးအသင်းကို ပရိသတ်များမှ ဝေဖန် အပြစ်တင်နေ ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မနေ့ကပွဲ အတွင်း မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ မျက်နှာ အမူအရာတွေကြောင့် အားလုံးက စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေ ကြရပြန်ပါတယ်။
သူတို့အားလုံး နိုင်ငံတော် သီချင်းကို တောင် လုံးဝမဆိုကြဘဲ သက်ပြင်းတွေ အကြိမ်ကြိမ် ချနေကြတာကို အားလုံးလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ကြရမှာပါ။ သူတို့အားလုံး ဘယ်လိုမှ မတတ်သာတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြောင့် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ကြတယ်လို့
ပရိသတ် တစ်ချို့မှ ကောက်ချက်ချနေ ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက အဆိုတော် ရန်ရန်ချန်း ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် တွင်လည်း မတတ်သာတဲ့ အခြေအနေ တွေကြောင့် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော မြန်မာအသင်းကို အပြစ် မမြင်ကြဖို့ တောင်းဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” မြန်မာဘောလုံး အသင်းကို အရမ်းမပြောကြပါနဲ့ကွာ သူတို့မှာလည်း မလွန်ဆန် နိုင်တာတွေရှိနေလောက် မယ်ထင်ပါတယ် သူတို့ အခုချိန်ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဖိစီးနေကြမလည်း….. သူတို့လည်း ပြည်သူတွေပါပဲ အချင်းချင်းအားပေး ကြရအောင်လေနော် 🇲🇲 ⚽” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်း မှ အရန်ကစား သမားတစ်ဦးက နိုင်ငံတော် သီချင်း ဆိုချိန်တွင် လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကစားသမား ရဲ့ ရဲရင့်သတ္တိ ရှိမှုတွေကို ပြည်သူတွေက လေးစား ဂုဏ်ယူ နေကြပြီး သူ့ရဲ့ဘေးကင်း လုံခြုံမှုအတွက်တော့ စိုးရိမ် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source and Photo Crd-Original Uploader and Yan Yan Chan’s Facebook Account
ယှဉ်ပြိုင် ကစားဖို့ အတွက် မင်းအုပ်စိုး အား လက်ဝှေ့ ကြိုးဝိုင်းထဲ လာရန် စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် HU GO….
အိချောပိုရဲ. ဆက်ဆီကျကျ နှင့် အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း ပုံရိပ်များ…